I-Nootropic Stack Guide Ehamba phambili: Konke Okudingayo Ukuze Ukwazi [Ukuhlangenwe nakho Kweminyaka engu-5]
Ubuwazi ukuthi ungaba ngongqondongqondo ngaphandle kokuthi ushise isibani sebusuku ebusuku? Ukube bekukhona i-powder engakusiza uthuthukise inkumbulo yakho noma ukwandise ukuphaphama kwakho, ubungeke uyithathe?
Namuhla, izidakamizwa ezihlakaniphile, eyaziwa nangokuthi yi-nootropics, ziba yisithandwa kwabaningi. Isizathu salokhu kungenxa yokuthi bayaziwa ukuthi bathuthukise impilo yomuntu yansuku zonke. Izinzuzo ze-nootropic zisukela ezingeni lokunakwa isikhathi eside, ukugxila kakhulu, ukugxila okwandayo kanye nobuchopho obuphapheme.
Uzoqaphela ukuthi kukhona abafundi abangaphatheki kahle ekukhumbuleni futhi bazofuna ukukhipha ukuhlolwa kwabo ngaphandle komzabalazo omningi. Futhi, kunabantu abanemisebenzi yezinga eliphakeme abanezitebele eziphakeme abangafuna ukulondolozwa kakhulu usuku lonke.
Ngaphezu kwalokho, abanye abantu bayasebenzisa ama-nootropics kanye ne-smart drug powder ukuphatha ukuphazamiseka kokusebenza kwezimoto njenge-Alzheimer's, isifo seHunnington, iParkinson, ne-ADHD. Kungenxa yezizathu ezinjalo ukuthi ungacabanga ukusebenzisa ama-nootropics ukuhlala phambili kokunye.
Kulesi siqeshana, sinciphise phansi abaphezulu abayi-15 i-nootropic powders nokuthi yini ebenza bavelele.
Ukuqonda izinhlobo ezahlukene ze-nootropics
Esikhathini esedlule esedlule, imboni yezidakamizwa ezi smart ikhulile, sekukhona ama-nootropics amaningi kunanini ngaphambili. Nazi izigaba eziyisithupha ama-nootropics angahlukaniswa ngazo;
Lezi ngezinye zezithuthukisi ezisetshenziswayo ezisetshenziswayo ezithengiswa ngaphezulu kwekhawunta. Okuhle ngabo iqiniso lokuthi bathuthukisa umsebenzi wokuqonda komuntu ngaphandle kokusebenza njengento evuselelayo noma evusayo. Yize ososayensi bengakayiqondi kahle inqubo yabo yokusebenza ngokugcwele, kuthiwa bandisa ukuhamba kwegazi futhi ukusetshenziswa kwe-oxygen kuyizingxenye ezithile zobuchopho.
Ngenhlanhla, zitholakala kalula njengoba ungazithola kalula ku-inthanethi. Futhi, zimbalwa kakhulu izehlakalo zemiphumela emibi eye yabikwa kuze kube manje.
Imvamisa, iningi lemithi kuleli klasi lisebenza kahle lapho lisetshenziswa isikhathi eside. Lokho kusho ukuthi ukujabulela izinzuzo eziphakeme, kufanele uyisebenzise amasonto ambalwa.
Noma iyiphi i-nootropic ethathwa njengeyamakhambi, i-organic, noma yemvelo ingekalesi sigaba. Imvamisa, imvamisa isekelwe ezitshalweni futhi inika izinzuzo zemvelo. Lesi sigaba semithi sivame ukuthandwa kakhulu ngoba kuphephile ukusisebenzisa njengoba singenazo izinto zokwenziwa noma amakhemikhali.
Enye yamaphutha aphambili yikuthi azipakeli i-punch uma ziqhathaniswa ne-synthetic nootropics. Ngakho-ke, umuntu angadinga ukuthatha imithamo ephezulu kakhulu ukuthola umphumela ofanayo nowokwenziwe.
Okutholakala kuVitamin B
Njengombana igama lisikisela, okuvela kuVitamin B ama-nootropics asuselwa kumaVithamini we-B ukukhipha izinzuzo ezinhle kakhulu. Zithinta amazinga e-glutamate, i-choline, ne-dopamine ebuchosheni, futhi lokhu kubenza babe usizo ekwelapheni ukuphazamiseka kwezifo zokucamba komzimba okufana ne-ADHD.
Ekugcineni, lezi zinto ezitholwayo zisetshenziswa ekwelapheni ukukhathala ngokomzimba nangokwengqondo kanye nasekuthuthukisweni kokugcinwa kwememori.
Cishe ufundile ngama-peptides esikhathini esedlule. Zivela ngokwemvelo ama-molecule emvelo enziwe ngama-amino acid futhi axhumene nezibopho zamakhemikhali ezihlanganayo. Yize zingatholakali kalula, iNoopept iyatholakala online kanye nasezitolo. Ama-peptides aqinile futhi akhombisile ukwenza ngcono isisusa, inkumbulo, amandla engqondo, amakhono okufunda, nokuphaphama.
I-Choline ngokwemvelo itholakala emzimbeni, kepha kwesinye isikhathi singase sihlushwa ukuntuleka kwayo. Ngenxa yalokho, lokhu kuholela ekunciphiseni kwamakhono okuqonda yingakho kuncishiswe ekuphilwenakho konke kwengqondo. Ukuthatha i-choline nootropics kusiza ekwandiseni ukukhiqizwa kobuchopho kwama-acetylcholine neurotransmitters.
Ama-Choline supplements angathathwa ngokwawo noma ndawonye nama-racetams. Uma zihlanganiswe ndawonye, ​​ziholela ekukhuliseni inkumbulo, amakhono okufunda, kanye nokuthuthuka ekujuleni kwenhliziyo.
Ama-ampakines angenye yama-nootropics anamandla kakhulu eyethulwa kamuva nje. Basebenza ngokushukumisa ama-glutamate receptors ebuchosheni. Njengomphumela, baholela emazingeni akhuphukayo e-glutamate, wona athuthukisa ukufunda nememori.
I-Powderot ye-Nootropic ehamba phambili: I-nootropic ehamba phambili yokuthuthukisa inkumbulo: I-nootropic ehamba phambili yokusebenza kwezemidlalo:
I-Purity %98% Flmodafinil powder
U-Purity≥98% Pramiracetam Powder
I-Purity≥98% iCarphedon powder
Isebenza kakhulu ngisho nakumithamo ephansi.
Imbalwa imiphumela emibi.
Uzozwa ukusebenza kwawo ngaphakathi kwemizuzu engamashumi amathathu ngemuva kokuwuthatha.
Kuholela emazingeni aphezulu wokukhumbula ngokusiza ukwakheka kwememori okude
Akumenzi umuntu ahlushwe yimiphumela emibi eminingi. ie, umphumela we-euphoric
Kukhahlela ngaphakathi kwamahora angama-1-2 ukuyithatha
Inikeza umphumela ovuselelayo obalulekile
Ingeniswa ngokushesha emzimbeni
Amazinga wethanga afinyelelwa kungakapheli ihora elilodwa lokusebenza kwawo.
Bheka Intengo Yekuchumana More Bheka Intengo Yekuchumana More Bheka Intengo Yekuchumana More
Nayi i-Top 15 Nootropics Smart Drug Powder:
Kuhle kakhulu i-nootropic powder-Flmodafinil powder
I-nootropic ehamba phambili yokuthuthukisa inkumbulo-Pramiracetam
I-nootropic ehamba phambili yokusebenza komncintiswano we-Carphedon powder
I-nootropic ehamba phambili yokuphaphama- i-Adrafinil Powder
I-Best intelligence kukuza - Fladrafinil (CRL-40,941) Powder
Isikhuthazo sokunakwa okungcono kakhulu- iHydrafinil (9-Fluorenol) Powder
I-Powder ehamba phambili esebenza ngokushesha nge-nootropic- Noopept (GVS-111)
I-nootropic ehamba phambili ye-neuroprotection-Nefiracetam Powder
I-Best enhancer engqondo- i-Aniracetam powder
I-nootropic enhle kakhulu ekwelapheni isifo i-Alzheimer's- J-147 Powder
I-Powder ephezulu yokulwa ne-nootropic-Magnesium L-Threonate
I-nootropic ehamba phambili ekukhuthazeni ukusebenza kwenhliziyo- Nicotinamide Riboside Chloride powder
I-nootropic ehamba phambili yokwelashwa kwesifo sikashukela-Galantamine Hydrobromide powder
I-nootropic ehamba phambili ekulweni nomdlavuza womlomo wesibeletho- Compound 7P powder
Isithuthukisi esihle kakhulu se-glutathione - i-N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester powder
Qhathanisa ama-powders we-nootropic angama-15 ahamba phambili ngo-2019
NAME I-RATING OKUQHAMUKA UMA UDLA IMISHANGUZO lAPHAKANYISIWE DOSAGE UKUPHILA OKUNGAPHELELE
I-Flmodafinil powder 5 Bambalwa kakhulu I-100-200mg ngosuku 12-15 amahora
I-Pramiracetam powder 5 Bambalwa kakhulu I-600-1200mg ngosuku 5-6 amahora
I-Carphedon powder 5 Bambalwa I-200-750mg ngosuku 3-5 amahora
I-Adrafinil powder 4.5 Bambalwa I-600-900mg ngosuku 12-15 amahora
I-Fladrafinil powder 5 Mancane imiphumela emibi I-100-200mg ngosuku 6-7 amahora
IHydrafinil powder 4.5 Bambalwa I-50-150mg ngosuku 6-8 amahora
I-Noopept popwder 5 Bambalwa I-30-60mg ngosuku 3-6 amahora
I-Nefiracetam powder 4.5 Bambalwa kakhulu I-600-900mg ngakunye 3-5 amahora
I-Aniracetam powder 5 Bambalwa 1500mg 1-2.5 amahora
I-J-147 powder 5 Eziningana I-20-30mg 1.5-2.5 amahora
I-Magnesium L-Threonate powder 5 Bambalwa I-1500-2000mg 44 amahora
I-Nicotinamide Riboside Chloride powder 4.5 Bambalwa kakhulu I-1000-2000mg 5.3 amahora
I-Galantamine Hydrobromide powder 4 eziningana I-4-8mg 7 amahora
I-7P powder 5 Bambalwa 5000mg 1-2 amahora
I-N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester powder 4.5 Bambalwa 5000mg 5.6 amahora
Khipha ku-internet i-nootropic powder ephelele
1. I-Purity≥98% Flmodafinil (CRL-40,940) powder 90280-13-0
Kumuntu ofuna i-nootropic esebenza kahle ngaphandle kokupompa okuningi kuyo ohlelweni, khona-ke iFlododinil powder iyisivumelwano sangempela. Kuyintokozo ukuyisebenzisa njengoba ithamo leFlododinil elidingekayo lihlukaniswe kabili ngosuku. Ukusuka ekubuyekezweni kweFlododinil okunikezwe abasebenzisi, kuyabonakala ukuthi le nootropic izokukwenza uzizwe futhi ucabange njengomqashi ngokuthatha nje inani elincane layo.
Kufakazelwe ukwandisa ikhono lomuntu lokuqonda nokukhiqiza ngokwandisa inani le-histamine, i-orexin, glutamate, kanye namazinga e-norepinephrine. Ngaphandle kwalokho kusebenza futhi ngokuvimbela ukwephulwa kwe-dopamine emzimbeni.
Yize kungenye entsha emakethe, yi-nootropics powder enhle kunazo zonke ngenxa yezinzuzo eziletha etafuleni. Enye yazo ukwanda kwekhono lomuntu lokufunda nokukhumbula.
Okwesibili, iyasiza ekwelapheni ukudana okuncane ngokubuyiselwa kwemizwa ejwayelekile yomuntu. Iphinde isize ekuphatheni kwe-ADHD nezinye izimo ezihlobene nokunaka. Ngokwengeziwe, i-Flmodafinil iyaziwa ukuthi ikhulisa ukuphaphama, ithuthukise ukugqugquzeleka, futhi igxile, futhi nokusebenza kangcono kwengqondo komuntu.
Lapho uqhathanisa i-Flmodafinil vs. modafinil, izici eziningana ezingena ekubalweni, ngokwesibonelo, imiphumela emibi yeFlododinil imbalwa kakhulu uma uyiqhathanisa naleyo yama-modafinil. Yize babonakala beyinto efanayo, ifomula yabo yokwakheka ihluke kakhulu, futhi lokhu kwenza ukuthi iFlododinin ibe ngaphezulu kwe-bioavava.
Ngokuphathelene nobukhona beFlododinil, kuya ezweni enivela kulo. Isibonelo, ukuze uthenge i-Flmodafinil powder eCanada, awudingi kadokotela, kuyilapho udinga wona ukuze uthenge iFlododinil eYurophu.
Uma uzibuza ukuthi ungawuthenga kuphi uFlododinin powder, khona-ke kufanele ungabe usabheka okunye. Ungahle ukhethe ukuthenga iFlododinil online njengenketho elula futhi eshibhile. Singumthombo we-ngokusemthethweni nootropic powders lapho ungathenga khona i-CRL-40,940 Flmodafinil powder.
Isebenza ngokuguqula i-histamine, i-orexin, i-dopamine, i-glutamate, kanye namazinga e-norepinephrine.
Umthamo ophakanyisiwe ngu-100-200mg ngosuku.
I-nootropic ehamba phambili yokuphuculwa kwememori
I-2 Purity≥98% Pramiracetam Powder 68497-62-1
Ukuthi ngabe ungumfundi ofuna ukwenza izivivinyo zawo zokugcina noma umdala ofuna ukululawula udaba lwabo oluyimpunga, khona-ke i-pramiracetam ukuphi. I-nootropic enhle kakhulu uma kuziwa ekugcineni imemori eqinile. I-Pramiracetam ingeyamalungu omndeni we-racetam kepha inamandla okuphindwe izikhathi ezingamashumi amathathu kunemijaho yamahhashi.
I-Pramiracetam powder isebenza ngokwandisa izinga lokutholwa kwe-choline nokukhiqizwa kwe-nitric oxide ebuchosheni. Izinzuzo eziyinhloko zePramiracetam zifaka; ukwenza ngcono ukugxila nokululama kunoma yikuphi ukulimala ebuchosheni. Kuyasiza futhi ekuguqulweni nasekuvinjelweni kwe-amnesia.
Isitaki sePramiracetam ngokuvamile siqukethe umthombo we-choline wokulwa namazinga we-acetylcholine ancishisiwe ebuchosheni futhi athuthukise umsebenzi wokuqonda. Kungabekwa futhi nge-Adrafinil, i-Armodafinil, neModafinil. Uma kuqhathaniswa iPramiracetam vs.Phenylpiracetam, kuyacaca ukuthi iPramiracetam ayibangeli imiphumela emibi njengokucasuka, isicanucanu, kanye nokuphathwa yikhanda njengakamuva.
Uma uhlela ukuthenga iPramiracetam ngokudayisa noma ngempuphu eningi, ke ungahlala usithembele.
Inokuqala kokusebenza okusheshayo.
Inikeza ukukhuthaza i-psycho ngaphandle kokuholela ku-hyperstimulation.
Isikhathi sokwelashwa sifushane.
Ithambeka-ke-ke i-soluble ngakho-ke kuphuzwa kahle ndawonye ngokudla.
I-nootropic ehamba phambili yokusebenza kwezemidlalo
I-3 Purity≥98% Carphedon (Phenylpiracetam) Powder 77472-70-9
ICarphedon isuselwa ku-piracetam okwahluka kwayo kuphela nge-piracetam yiqembu le-phenyl elinamathele kuyo. Ngenxa yaleli qembu, isilinganiso se-phenylpiracetam powder esidingekayo ukunikeza umphumela ofanayo ne-Piracetam siphansi futhi sithathwa njengamandla amakhulu izikhathi ezingama-20-60 kunePiracetam.
Iningi lezibuyekezo zePhenylpiracetam zishaya ngamandla ngokusebenza kwalo ekuthuthukiseni ukusebenza kwezemidlalo ngenxa yemiphumela yokuvuselela eliyinikezayo. Kuyasiza futhi abantu ukumelana namakhaza. Ezinye izinzuzo zifaka ukuphathwa kwesifo sokuwa, isifo sohlangothi, ukuphazamiseka kwememori nokukhathala.
IPhenylpiracetam akufanele ithathwe ngesikhathi sokulala ngoba ingaholela ekuphazanyisweni kokulala. Futhi, kufanele uyithathe kabili noma kane ngesonto noma ngemijikelezo ukuvikela umzimba ekwakheni ukubekezelelana nomphumela ovuselelayo.
I-nootropic ehamba phambili yokuvuka
I-4 Purity≥98% i-Adrafinil Powder 63547-13-7
Uma inhloso yakho ukukhulisa ukuphaphama nokunciphisa ukulala, lapho-ke kufanele ucabangele ukuthatha i-adrafinil powder. Ubuningi bezibuyekezo ze-Adrafinil bukhombisa ukuthi kuyasiza ekusizeni umuntu ukuthi ahlale ephapheme isikhathi eside. Ngokuya nge-Adrafinil Vs. IModafinil isigamu sempilo, eyokugcina ineside. I-Adrafinil kodwa iguqulwa ibe yi-modafinil ngenkathi isemzimbeni ingeza engxenyeni yempilo yayo yingakho imiphumela ehlala isikhathi eside.
Eminye imiphumela ye-Adrafinil ifaka phakathi ukugxila okwandayo; ukwenza ngcono ikhono lomuntu lokufunda nenkumbulo esekelayo. Yize ingadala imiphumela emibi embalwa, ibhekwa njengesikhuthazi esiphephile ngoba ayibangeli imiphumela emibi eminingi ehambisana nezikhuthazi.
Kungcono uthathwe ngamanzi noma ijusi lewolintshi ngenxa yokunambitheka okubabayo kwe-Adrafinil powder. Njengoba kusemthethweni emazweni amaningi, ungathenga i-adrafinil powder online ngaphandle kwesidingo sencwadi kadokotela.
Umthamo ophakanyisiwe ucishe ube yi-600-900mg.
The Imiphumela ye-Adrafinilihlala amahora angu-12-15.
Akufanele kuthathwe nsuku zonke noma isikhathi eside njengoba kwakha ukubekezelelana.
Isikhuthazi esikhulu sezobunhloli
I-5 Purity≥98% Fladrafinil (CRL-40,941) Powder 90212-80-9
Ngabe ufuna okuthile okuzokusiza ukhuphukele emathubeni angaphezu kwalokho owake waphupha ngakho? I-Fladrafinil powder iyisidakamizwa esingcono kakhulu ekwandiseni ukucaca kwengqondo namandla akho. Isebenza ngokuvimbela ukuwohloka kwe-dopamine yingakho ukulawulwa kwezimpendulo zemizwa, ukufunda nokunakwa.
I-Fladrafinil ifana ne-modafinil powder ngokuya ngokwakhiwa kwayo kanye nemiphumela ngomehluko kuphela wokuba i-more fluoride molecule. Ukwengeza kwenza ukuthi i-Fladrafinil ingene kalula emzimbeni.
Imiphumela emibi yeFladrafinil imbalwa, kepha ubunzima bayo bungakhuphuka ngokusetshenziswa njalo. Ngenhlanhla, itholakala kalula, futhi ungathenga i-Fladrafinil online uma ufuna.
The Umthamo weFladrafinilkufanele kube ngu-100-200 mg ngosuku.
The Imiphumela emibi yeFladrafinilzenzeka njalo.
Inamandla izikhathi ezingama-3-4 kune-Adrafinil ne-Modafinil.
Isikhuthazo sokunakwa okuhle kakhulu
I-6 Purity≥98% Hydrafinil (9-Fluorenol) Powder 1689-64-1
I-Hydrafinil powder, eyaziwa nangokuthi i-Fluorenol iyi-dopamine reuptake inhibitor nomphumela wayo omkhulu ukwandisa ukunaka. Ezinye izinzuzo ze-Hydrafinil zifaka amandla wengqondo athuthukisiwe, ukugxila okungcono, nokukhathala okunciphisiwe.
Indlela yokusebenza ye-Hydrafinil ibandakanya nokwanda kwe-histamine, norepinephrine, kanye namazinga e-glutamate wokuthuthukisa imizwa yomuntu. Lapho kuqhathaniswa ne-Hydrafinil vs. modafinil bioavailability, i-Hydrafinil nootropic ikhombisile ukuthi inesifushane.
Ukuthengiswa kwayo akukho emthethweni ngakho-ke ungathenga i-Hydrafinil eluhlaza (9-Fluorenol) noma nini lapho ufuna.
Akubizi kakhulu uma kuqhathaniswa nezinye i-nootropics.
IHydrafinil ayishukumisi kangako ngenxa yalokho ukusabela okumbalwa okungekuhle.
The Imiphumela yeHydrafinilkucatshangwa ukuthi zicashile.
I-nootropic ehamba phambili esebenza ngokushesha
I-7 Purity≥98% Noopept (GVS-111) Powder 157115-85-0
I-Noopept powder iyi-nootropic yokwenziwa ethathwe kabanzi njengesengezo. Yisidakamizwa esisebenza ngokushesha esisebenza ngokushesha njengoba kungenzeka uzwe umphumela waso kungakapheli nemizuzu. Uma uzibuza ukuthi uNoopept usebenza kanjani, khona-ke ngizokutshela ukuthi kanjani. Indlela esebenza ngayo ifaka phakathi ukwanda kwamakhemikhali obuchopho obalulekile; NGF futhi BDNF.
Izinzuzo zeNoopept zifaka phakathi ukuthuthuka kwememori yomuntu, ukucaca, isivinini somcabango, ukugxila, ukuzethemba, kanye nomdlandla.
Umphumela ovelele we-Noopept uhlangothi yizinhlungu eziwumphumela wokuthatha umthamo omkhulu noma ukusebenzisa i-Noopept nootropic powder okokuqala. Ubuhle beNoopept ukuthi busemthethweni futhi bulawulwa kuphela emazweni ambalwa. Lokho kusho ukuthi uma udinga ukuthenga i-Noopept, udinga ukucabangela imithetho yezwe lakho. Ngokwenza lokhu, ungatshela ukuthi ngabe udinga i-kadokotela noma cha.
The Umthamo we-Noopeptngu-30-60 mg ngosuku.
Kuyabekezeleleka kakhulu futhi kuza nemiphumela emincane kakhulu.
Ihlanganiswe kahle nge-choline.
I-nootropic ehamba phambili ye-neuroprotection
I-8 Purity≥98% Nefiracetam Powder 77191-36-7
Ngemuva kokuhlaselwa yisifo sohlangothi, iziguli eziningi kubikwa ukuthi zihlaselwa yisifo sokuwa, okungaholela ekulimaleni kobuchopho kanye nasekulahlekelweni yimemori. Ngenhlanhla, i-Nefiracetam ikhombisile ukuthi ivikela ekuhlaselweni. Lokhu ikwenza ngokulawula ukusayinwa kwe-NMDA okuvimbela ukukhuphuka kwamazinga e-glutamate.
Ingelinye lamalungu amasha wamalungu e-racetam, futhi ezinye izinzuzo zalo zifaka phakathi ukuthuthukiswa kwemizwa, ukufunda nokukhumbula. Uma kuqhathaniswa i-nefiracetam VS aniracetam, ukubuyekezwa okuningi kwe-nefiracetam kubika ukuthi kubangela ukuthuthuka okukhulu esimeni somuntu.
Imiphumela emibi ye-Nefiracetam imbalwa, ngakho-ke ibhekwa njengephephile futhi ibekezeleleke kahle.
Isidakamizwa esi-soluble; ngakho-ke, imithamo ephansi ivame ukusebenza kahle uma uyiqhathanisa ne-piracetam.
INefiracetam yenze nezifundo zezilwane kanye nezinye izifundo zabantu.
Umthamo ngu-100mg-900mg ngosuku, othathwe kabili; munye ekuseni bese kuthi owesibili ekuseni.
Isithuthukisi esihle kakhulu ngokwengqondo
9 Ukuhlanzeka≥98% Aniracetam i-powder 72432-10-1
I-smart powder aniracetam iyi-nootropic ye-ampakine enamandla kakhulu kune-piracetam. Kuthatha indondo uma kukhulunywa ngokuthuthukiswa kwengqondo futhi isebenza ngokuvuselela ama-AMPA receptors; i-receptor ejwayelekile kakhulu ye-CNS. Ama-receptors e-AMPA adlala indima enkulu ekwakheni izinkumbulo nokufunda.
Ezinye izinzuzo ze-Aniracetam powder zifaka phakathi ukwanda kokucabanga, ukunciphisa ukukhathazeka, nokwanda kokubona. Imiphumela emibi embalwa oyibangelayo uma iqhathaniswa ne-piracetam iyenza idume kakhulu ingasaphathwa imiphumela yayo enamandla kakhulu kunenkomishi yekhofi.
I-Aniracetam powder ikhulisa amandla wobuchopho bomuntu ngokwandisa i-neurotrophic factor etholakala ngobuchopho, esebenza njengomanyolo wobuchopho.
The Umthamo we-Aniracetamihlukaniswe kabili ngosuku nge-1500mg.
Umuntu angazizwa Umphumela we-AniracetamImizuzu engu-15 ukuya kwengama-20 ngemuva kokuyithatha.
I-nootropic enhle kakhulu ekwelapheni isifo se-Alzheimer's
I-10 Purity≥98% J-147 Powder 1146963-51-0
I-J147 powder iyi-nootropic eyenziwe ngo-2011, futhi lokho kungabuyisela emuva ukulahleka kwenkumbulo, isifo se-Alzheimer's esisheshayo noma esibuhlungu. Ingxenye yeqembu le-phenyl hydroxide futhi lithathwe engxenyeni yezinongo ze-curcumin's curry spice.
I-J147 isebenza ngokunciphisa umsebenzi we-ATP synthesis ku-mitochondria. Ngalokhu, ivikela amangqamuzana e-neuronal kusuka kubuthi bobuchopho obuhlobene nobudala. Lolu cwaningo lube yimpumelelo kubacwaningi ngoba iningi lezidakamizwa ze-Alzheimer lalibhekise uqweqwe lwe-amyloid ebuchosheni beziguli ze-Alzheimer's. Izidakamizwa ze-Alzheimers azange zisize kangako.
Kube nokuhlolwa okwandile kwe-J147 kwemitholampilo, futhi kuze kube manje kukhonjiswe ukuthi kuyasebenza futhi kubhekwa njengokuzinza. Ngemiphumela yecala le-J147 ethembisayo, kusobala ukuthi i-J147 ingasiza ekwelapheni i-Parkinson's and stroke.
I-J147 isiza ekwelapheni izifo ze-neurogenerative.
Umuthi olulutho onezinto ezilwa nokuguga.
I-J147 isebenza ngokubopha iprotheni etholakala ku-mitochondria (amaseli asiza esizukulwaneni samandla).
I-nootropic ehamba phambili yokulwa nayo
11 Purity≥98% Magnesium L-Threonate Powder 778571-57-6
Wake wacabanga ukuthi ikhono lakho lokuqonda lingahlala lingaguquki ngisho nasekugugeni? I-Magnesium L-Threonate powder ingusawoti oyingqayizivele we-L-threonic acid magnesium ogcwalisa i-magnesium ebuchosheni bomuntu, ayenze isebenze kahle. Ingenye yamafomu we-magnesium atholakala kakhulu emakethe.
I-Magnesium L-Threonate powder nootropic isebenza ngokwandisa ubukhulu be-synaptic ezungeze isifunda se-hippocampus esitholakala ebuchosheni. Ngokwenza lokhu, kukhuthaza inkumbulo ende, emfushane, kanye nokusebenza kokubili kwabancane nakwabadala.
Kuphinda futhi kwandise nesimo se-magnesium emzimbeni kanye namakhono abo okuqonda.
Umthamo ofanele we-Magnesium L-Threonate ngu-1500-2000mg
Kuyasiza ukwenza ngcono ukukhumbula, kunciphise inkumbulo ngenxa yokuguga, futhi kusize ekwakhiweni kwezindlela ezintsha.
IMagnesium L-Threonate yadalwa okokuqala ngabaphenyi e-MIT ababefaka owina umklomelo weNobel.
I-nootropic ehamba phambili ekukhuthazeni umsebenzi wenhliziyo
12 Purity≥98% Nicotinamide Riboside Chloride powder 23111-00-4
INicotinamide riboside Chloride powder iyona nicotinamide adenine dinucleotide entsha sha emakethe, okuyisandulela ngovithamini. Inzuzo enayo ukuthi iguqulwa kalula ibe yi-NAD + kanye emzimbeni uma iqhathaniswa nezinye izanduleli ze-NAD +.
I-Nicotinamide riboside Chloride powder eyingi yehlisa ubungozi bokuhlaselwa yisifo senhliziyo ngokuguqula izinguquko ezihlobene nobudala emithanjeni yakho. Ngokukhulisa amazinga we-NAD +, kuncipha ubukhulu, ukuqina okunezela ekuguqukeni.
Ezinye izinzuzo zeNicotinamide riboside Chloride zifaka phakathi ukusiza ekwehliseni isisindo, ukwehlisa ingozi yomdlavuza, ukusiza ekwelapheni i-jet lag, nokusiza ekukhuthazeni ukuguga kwemisipha okunempilo.
Imiphumela emibi ayibalulekanga, kepha ubukhulu bokuthi bunyuke ngomthamo ophakeme.
Ikhuphula amazinga egazi ama-NAD + kuze kube izikhathi ezingama-2.7.
Umuthi ofanele weNicotinamide riboside Chloride ngu-1000-2000mg ngosuku.
Kuphephile nemiphumela emibi embalwa kakhulu yeNicotinamide riboside Chloride eye yabikwa.
I-nootropic ehamba phambili yokwelashwa kwesifo sikashukela
13 Ukuhlanzeka≥98% Galantamine Hydrobromide powder 69353-21-5
Namuhla, isifo sikashukela singesinye sezimo ezihola abantu abahlupheka ngazo emhlabeni jikelele. Ngenhlanhla, le nhlanganisela equkethe i-nitrogen ikhombisile ukusiza ukuphatha lesi sifo. Lokhu ikwenza ngokuthuthukisa izindlela zokusayina ze-insulin. IGalantamine Hydromide futhi inciphisa ukukhuluphala ngokwehlisa ukuvuvukala, ukumelana ne-insulin, isisindo somzimba, namazinga we-cholesterol.
Esikhathini esedlule, ibisetshenziswa ekwelapheni ubuthakathaka bemisipha nokuzwa kwenhliziyo, kanye nokusebenza kwezimoto okulethwa ukuphazamiseka kwesistimu yezinzwa ephakathi.
Okunye ukusetshenziswa kweGalantamine Hydromide kufaka phakathi ukukhulisa umsebenzi wokuqonda, ukunciphisa ubuhlungu be-arthritic, nokwenza ngcono izimpawu ezinganeni ezine-autistic kanye nesifo i-Alzheimer's.
Itholakala ezimbali nasezinambeni zesithwathwa seqhwa laseCaucasian, iDaffodil, i-spider lily ebomvu, iGaranthus woronowii kanye neqhwa leqhwa likaVoronov.
IGalantamine Hydromide igxiliwe kahle, ine-bioavailability yomlomo engama-90%.
Kuyasiza ekuphatheni kwezifo eziwohlokayo ezifana ne-Alzheimer's ngokuthuthukisa inkumbulo yomuntu, ukuqwashisa, kanye nekhono lokwenza imisebenzi yansuku zonke.
Best nootropic ekulweni umdlavuza wesibeletho
I-14 Purity≥98% Inhlanganisela engu-7P powder 1890208-58-8
I-7P powder eyimpuphu ingumgubo omhlophe ophuma emhlophe owenziwe waba munye ochungechungeni lwamakhemikhali ngenhloso yokuhlonza ama-inhibitor ama-antagonist inhibitors asebenza kabili. I-nootropics ehlanganisa i-7P powder ikhuthaza ukukhula kwe-gap-43 axon positive okuholela ekuvuseleleni ukuvuselelwa kwe-axon ku vivo.
I-7P ye-composed ikhombisile umsebenzi ophakeme kakhulu ekulweni namathumbu womlomo wesibeletho ngokuthuthukisa i-micostosition ngendlela yokuya kumthamo.
Ezinye izinzuzo ze-7P powder zifaka; ukukhuphuka kokuxhumana, ukwelashwa kokulimala kobuchopho obuhlobene notshwala, kanye nokuvinjwa kwe-oxidation ezungeze ubuchopho. Kuyasiza nokwenza ngcono imizwa yomuntu futhi ulwe nokukhathala.
I-soluble kancane emanzini kanye ne-ethanol.
Umthamo ophakanyisiwe we-7P powder kufanele ube cishe ngo-5000mg.
Kuthatha ihora elilodwa noma amabili ukuphakama.
Isithuthukisi esihle kakhulu se-glutathione
I-15 Purity≥98% N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester powder 59587-09-6
I-N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester (NACET) iyifomu le-ester le-N-acetylcysteine ​​(NAC) lapho i-esterification ifaka isandla ekwandeni kwe-lipophilicity ye-NAC yingakho ithuthuka kwi-pharmacokinetics yayo. Lesi sici sengeza ngokuncipha kakhulu lapho sibanjwa khona kumaseli okuholela ekuguqukeni kwawo kube yi-cysteine ​​ne-NAC.
Kuyisandulelo se-GSH nge-bioavailability ephezulu kakhulu yomlomo. I-NACET isebenza ngokufaka esikhundleni se-NAC njenge-ejenti ye-mucolytic, njenge-antioxidant ehlobene ne-GSH, futhi njenge-antacote paracetamol.
I-soluble ngokukhululekile emanzini kanye ne-soltiv organic.
Ingena ngokushesha kumaseli ngemuva kokuphatha.
I-NACETisiza ekuphatheni kwezifo eziwohlokayo njengesifo se-Alzheimer's.
Yini okufanele ucabangele ngaphambi kokuthenga ama-nootropics
Ukukhetha i-nootropic efanele kudinga ucwaningo oluncane, kepha kuyakufanelekela njengoba kukuqinisekisa imiphumela oyifunayo. Nazi ezinye zezinto okufanele zikhunjulwe ngenkathi ufuna i-nootropic;
Ukuthatha i-nootropic kanye ngosuku bese ukhohlwa ngakho, yilokho iningi labantu elingathanda ukukwenza. Kodwa ngomqondo wangempela, ukuthola i-nootropic enhle esebenza nge-dosage interval kunzima. Yiya kulabo abangathathwa kabili noma kathathu ngosuku ukuze umzimba wakho ujwayele umthamo ohlelelwe kahle usuku lonke ngokuqhathaniswa nokuba nomthamo owodwa wokuthuthumela.
Awufuni ukuthenga ama-nootropics angaphezu kwesabelomali sakho. Kodwa-ke, kufanele ubheke ukuthi zonke zehlukile futhi izindlela zazo zokukhiqiza azifani yingakho intengo. Futhi awulindeli ukuthenga imithamo ephezulu yama-nootropics ngezithako zekhwalithi ngentengo yamantongomane. Ngakho-ke ngaphambi kokuxazulula eshibhile, qiniseka ukuthi uhlole ukuthi wenza umsebenzi omuhle yini. Lokho akusho, noma kunjalo, kusho ukuthi udlula ama-nootropics akho; funa lokho okufanela ephaketheni lakho.
Njalo i-nootropic inomphumela obangela wona. Uma ufuna eyodwa engakhulisa ukugxila kwakho, kukhona lokho. Ngakolunye uhlangothi, uma uhlose ukulawula isifo se-Alzheimer's, lapho-ke kufanele uthole okungcono kakhulu kwalokho.
Futhi, ezinye zingadala imiphumela emibi eminingi uma iqhathaniswa neminye. Akekho umuntu othanda ukwenza kahle kakhulu esikoleni kuphela ogcina enokwehluleka kwesibindi. Ngemuva kwakho konke, impilo yakho iza kuqala, futhi ubungeke uthande ukuthatha okuthile okungakulimaza.
Kwesinye isikhathi, umuntu angafuna ukuhlanganisa ama-nootropics amabili noma ngaphezulu ukuthola imiphumela emihle yokuqonda. Kodwa-ke, kufanele uqaphele ukuthi akuwona wonke ama-nootropics aphephile lapho efakiwe. Njengoba izitaki zaziwa ukwandisa i-potency kanye nokunciphisa imiphumela emibi, ezinye zingase zingaphephe kuwe. Ngakho-ke, kufanele wazi izithako zendlela ngayinye kanye nendlela abaxhumana ngayo ngaphambi kokuthenga kubo ukuze ubeke.
Enye into okufanele uyiqaphele ukuthi lingakanani inani locwaningo olwenziwe kwi-nootropic. Abanye basilela ekusetshenzisweni kocwaningo ngenkathi abanye kungenzeka bangahloli kubantu. Kule nkathi, kunezidakamizwa eziningi ezihlakaniphile ezenziwe ngocwaningo lwazo ngokwenele.
Ngakho-ke kuzobe kuphephile kuphela ukuthi ukhethe umkhiqizo onikezwe ngokwenele futhi uqinisekiswe ukuthi uyasebenza. Ngalesi, uqinisekiswa ngokuthula okuthile kwengqondo kanye nokugwema ukumoshelwa imali ngokuthatha izinto ezingakulimaza noma zingasebenzi.
Kuningi okutshiwo ngomkhiqizo ngawo wonke umuntu owake wawusebenzisa phambilini. Imininingwane enjalo kufanele ikusize uzinze kokuhle futhi unciphise ithuba lokuthenga i-nootropic engasebenzi. Iya kulabo abanokubuyekezwa okuhle kakhulu futhi ezimbalwa ezingezinhle.
Ngokuvamile, kuningi okufanele ucabangele ngaphambi kokusebenzisa imali yakho kunoma iyiphi i-nootropic. Ukuthola okungcono kakhulu, kufanele ukhombe kuwo wonke amaphuzu anikeziwe ukuze ukhokhele lokho okuthola amaphuzu amaningi uma kungewona wonke.
Ama-Nootropic Smart Drug Powder FAQs
Ingabe ama-nootropics anemiphumela emibi?
Yebo, kunjalo. Ubukhulu bemiphumela emibi, noma kunjalo, kuya nge-nootropic oyikhethayo. Ungaxwaya imiphumela emibi ngokugwema ama-nootropics asezingeni eliphansi nemithamo ephezulu.
Yini ama-nootropics asetshenziselwa?
Ama-Nootropics asetshenziselwa ukuthuthukisa izinqubo zokuqonda komuntu. Lokho kufaka phakathi ukuthuthukiswa kokuqamba, ukukhiqiza, ukukhathazeka, ukulala, nokufunda ngokuqinisa ukugxila komuntu, ugqozi, inkumbulo phakathi kwabanye.
Ubungako be-nootropics buyehluka ngokuya ngokuthi uhlala kuphi nohlobo lwe-nootropic ofuna ukuyithatha. E-United States, iningi lama-nootropics libhekwa njengezithako zokudla ezisemthethweni kanti kwamanye amazwe aseYurophu, ama-nootropics alawulwa kakhulu. Kwezinye izifundazwe, zingokomthetho ezingama-100%.
Ingabe izidakamizwa ezi-smart zingamlutha?
Ama-Nootropics awamlutha uma uwathatha ngendlela yawo emsulwa. Uma zihlanganiswa nezithasiselo ezinomlutha, zokwenziwa njenge-caffeine, khona-ke kungenzeka zakha umkhuba. Ama-nootropics asezingeni eliphakeme awubeki ebungozini bokuluthwa ngamakhemikhali futhi angakusiza ekunqobeni umlutha onjengokubhema ugwayi.
Ingabe ama-nootropics aholela ekunciphiseni isisindo?
Inhloso eyinhloko yokuthatha i-nootropics akuyona ukwehlisa isisindo. Kungukuthuthukisa ukuqonda. Noma, kwezinye izimo, ukusebenza okuthuthukile kokuqonda kungaholela ekunciphiseni isisindo.
Izinzuzo zokusebenzisa i-nootropics
Zonke izinsuku, sifuna umkhawulo; into ezosenza sibe ngcono kunabanye. Wake wacabanga ngaphandle kwebhokisi futhi wabheka ukusetshenziswa kwe-nootropics kungenye yezindlela ezinganikeza impilo yakho ukuguquguquka?
Ukusetshenziswa kwe-nootropics kuza nezinzuzo eziningana, futhi uma ungaboni imiphumela ebalulekile ngokusetshenziswa kwe-nootropic eyodwa, ungahlanganisa ezimbili noma ngaphezulu ukuze ubone imiphumela ehlukile kakhulu.
Ngezansi ezinye izinzuzo ze-nootropic;
Khulisa ukugxila kwakho
Ngabe uke wazithola ucabanga ngenye into yokuthi uze wakhohlwa nomsebenzi osuwenzile? Kuyinto ejwayelekile, kepha kwesinye isikhathi ungazizwa sengathi unenkinga yokugxila entweni eyodwa ngaleso sikhathi unenqwaba yamaphrojekthi angakaqedi nemibono ebhakwe ngesigamu. Manje wenzani?
Ukuthatha ama-nootropics kufakazelwe ukusiza ngalokho ngokusiza ukugxila kakhulu kanye nesikhathi esithe xaxa. Kamuva, unganikeza wonke umsebenzi ukunakwa okukufanele noma ngabe kuzwakala sengathi unemicabango eminingi.
Mhlawumbe usifundile isihloko esithile, usiqonda kahle futhi kodwa wakhohlwa konke ngisho nangaphambi kosuku lokuhlolwa. Lokho akufanele kukubangele inkathazo futhi; ukuthatha ama-nootropics kufakazelwe ukuthi kuwusizo kumemori yabantu.
Kuthuthukisa ukukhunjulwa komuntu ngokwenza ngcono nokulungisa zonke izingxenye zememori yomuntu futhi uyakhumbula. AmaNootropics futhi asekela ukuthuthukiswa kwamangqamuzana obuchopho futhi andise ukuxhumeka kwama-neurons. Ngokuxhumana okuthuthukile, ukuqonda, kanye nokukhumbula imininingwane yedatha kuyathuthukiswa.
Thuthukisa impilo yakho yobuchopho jikelele
Ingqondo ingenye yezingxenye zomzimba ezibaluleke kakhulu. Ukusebenza kwawo, kepha, kuthinteka ekudleni okungekuhle kanye nama-shejithali amatasa. Ngokusebenzisa ama-nootropics, awugcini nje ngokwenza ukuthi inkumbulo yakho ithuthukiswe, kepha nempilo yengqondo yonke iba ngcono.
Lokho kutholakala ngokwanda komsinga we-oksijini oya ebuchosheni nokugcinwa kwama-neurons namaseli wobuchopho, okwenza ama-brainwaves asebenze kakhudlwana.
Khulisa isimo sakho sengqondo
Isimo esingesihle singonakalisa usuku lwakho futhi sikwenze ungakwenzi imisebenzi yakho njengoba kufanele ibe njalo. Ngenhlanhla, kunemikhiqizo etholakalayo engathuthukisa imizwa yakho, ikwenze ube umuntu ojabule kakhudlwana. Ama-Nootropics angakunika lokhu okwenza ugxile futhi ugxile kakhulu emisebenzini okungenzeka ukuthi unayo.
Izinkuni S, Sage JR, Anagnostaras SG (2014). “Ama-Psychostimulants kanye ne-cognition: Pharmacol. ISamb. 66 (1): 193–221.
UFrati P, uKyriakou C, uMarinelli E, uVergallo GM, uZaami S, uBusardò FP (2015). “Izidakamizwa ezihlakaniphile zokukhulisa ukuqonda nokuqina komzimba :. I-Curr Neuropharmacol. 13 (1): 5–11.
UGiurgea, uCorneliu, (JanuarY, 1977). "Izidakamizwa ze-Nootropic". Intuthuko ku-Neuro-Psychopharmacology. 1: 235-247
1.Ukuqonda izinhlobo ezahlukahlukene ze-nootropics
2.Qhathanisa ama-powders ama-nootropic amahle kakhulu angama-15 ngo-2019
3.Best jikelele powder nootropic
I-nootropic engu-4 engcono kakhulu yokwenza ngcono inkumbulo
I-nootropic ye-5 engcono kakhulu yokusebenza kwezemidlalo
I-nootropic engcono kakhulu yokuvuka
Isithuthukisi se-7.Best intelligence
Umgqugquzeli wokuqapha okungu-8
9.I-nootropic esebenza ngokushesha kakhulu
I-nootropic eyi-10 engcono kakhulu yokuvikela i-neuroprotection
Isithuthukisi esingcono kakhulu seengqondo
I-nootropic engcono kakhulu ekwelapheni isifo i-Alzheimer's
13.I-nootropic engcono kakhulu yokulwa nokuguga
I-nootropic eyi-14 ekukhuthazeni umsebenzi wenhliziyo
I-nootropic engcono kakhulu yokwelashwa kwesifo sikashukela
I-nootropic engcono kakhulu ekulweni nomdlavuza womlomo wesibeletho
Isithuthukisi se-17.Best glutathione
Yini okufanele uyicabangele ngaphambi kokuthenga ama-nootropics
Ama-FAQ we-Nootropic Smart Drug Powder
Izinzuzo zokusebenzisa ama-nootropics
2019-07-27 i-wisepowder Ama-Nootropics
I-WISEPOWDER igxile ocwaningweni, ekwenziweni nasekusunguleni kwezithako zezithako ze-nootropic nezomsoco. Singumkhiqizi wezithako onobungcweti kanye nomphakeli wamakhemikhali wezemithi, izithasiselo zokudla okunempilo kanye nemikhiqizo ye-biochemical.
Cha. 668, Xiangyin Road, District of Yangpu, 200433, Shanghai, China
I-Pterostilbene Vs Resveratrol: Yikuphi Okungcono Empilweni Yakho? 2020-08-26
Izinzuzo Eziyishumi Eziphezulu Zezempilo ze-Glutathione zomzimba wakho 2020-06-06
I-Red Yeast Rice Extract Supplements: Izinzuzo, Umthamo, kanye Nemiphumela Etethayo 2020-05-20
Izinzuzo Zokuphila Ezinsundu Ezimnyama kanye Nesicelo 2020-05-14
Ukuzikhulula: Asenzi izimangalo ngemikhiqizo ethengiswa kule webhusayithi. Alukho ulwazi olunikezwe kule webhusayithi oluye lwahlolwa yi-FDA noma i-MHRA. Noma yiluphi ulwazi olunikezwe kule webhusayithi lunikezwa ngokwazi kwethu futhi akuhloselwe ukufaka izeluleko zikadokotela oqeqeshiwe. Noma yibuphi ubufakazi noma ukubuyekezwa komkhiqizo okunikezwe amakhasimende ethu akuyona imibono ye- wisepowder.com futhi akufanele kuthathwe njengezincomo noma iqiniso. Imininingwane © WISEPOWDER Inc.
Call us nge Skype
Bhalisa isiteshi sethu se-YouTube